Yohane Kyerɛwtohɔ 13:1-38
Yesu hohoroo n’asuafo nan ho (1-20)
Yesu kae sɛ Yuda na obeyi no ama (21-30)
Ahyɛde foforo (31-35)
“Sɛ mododɔ mo ho a . . .” (35)
Yesu kae sɛ Petro bɛka sɛ onnim no (36-38)
13 Ansa na Twam Afahyɛ no rebedu no, na Yesu nim sɛ ne bere aso+ sɛ ofi wiase na ɔkɔ Agya no nkyɛn.+ Esiane sɛ na Yesu dɔ ɔno ara ne de a wɔwɔ wiase no nti, ɔdɔɔ wɔn kosii awiei.+ 2 Ná wɔredi anwummere aduan no, na na Ɔbonsam de ahyɛ Simon ba Yuda Iskariot+ komam dedaw sɛ onyi Yesu mma.+ 3 Ná Yesu nim sɛ Agya no de nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa. Ná onim nso sɛ ofi Onyankopɔn hɔ, na ɔrekɔ Onyankopɔn nkyɛn.+ Enti 4 ɔsɔre fii anwummere aduan no ho, na oyii n’ataade nguguso guu hɔ, ɛnna ɔfaa mpopaho de sii n’asen.+ 5 Ɛno akyi no, ɔde nsu guu kankyee bi mu, na ofii ase hohoroo asuafo no nan ho, na ɔde mpopaho a ɛbɔ ne mu no popaa wɔn nan ho. 6 Bere a oduu Simon Petro so no, Petro bisaa no sɛ: “Awurade, wo na worehohoro me nan ho?” 7 Yesu buaa no sɛ: “Nea mereyɛ yi, seesei de worente ase, na eyinom akyi na wobɛte ase.” 8 Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Worenhohoro me nan ho da.” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ manhohoro wo nan ho+ a, wunni m’afa.” 9 Simon Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, nhohoro me nan ho nko ara, mmom hohoro me nsa ho ne me tirim nso ka ho.” 10 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara a waguare no, enhia sɛ wɔhohoro ne ho baabiara ka ne nan ho, efisɛ ne ho nyinaa afi. Mo ho afi, nanso ɛnyɛ mo nyinaa.” 11 Ná onim onipa a obeyi no ama.+ Ɛno nti na ɔkae sɛ: “Ɛnyɛ mo nyinaa na mo ho afi” no. 12 Bere a ɔhohoroo wɔn nan ho wiei no, ɔhyɛɛ n’ataade nguguso no, na ɔkɔtenaa ɔpon no ho bio. Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Nea mayɛ ama mo yi, mote ase? 13 Mofrɛ me ‘Ɔkyerɛkyerɛfo’ ne ‘Awurade,’ na ɛyɛ ne kwan so, efisɛ meyɛ Ɔkyerɛkyerɛfo ne Awurade.+ 14 Enti sɛ me a meyɛ Awurade ne Ɔkyerɛkyerɛfo no, mahohoro mo nan ho+ a, mo nso, ɛsɛ sɛ* obiara hohoro ne yɔnko nan ho.+ 15 Na magyaw mo nhwɛso* sɛ, sɛnea mayɛ ama mo no, mo nso monyɛ saa ara.+ 16 Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, akoa nsen ne wura. Saa ara nso na nea wɔasoma no no nsen nea ɔsomaa no no. 17 Sɛ munim eyinom na moyɛ a, mo ani begye.+ 18 Ɛnyɛ mo nyinaa na mereka mo ho asɛm; minim wɔn a mayi wɔn. Na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a kyerɛwsɛm yi bɛba mu ntia.+ Ɛka sɛ: ‘Nea na odi m’aduan* no, wasɔre atia me.’*+ 19 Efi saa bere yi, mereka akyerɛ mo ansa na aba, na sɛ ɛba a, moagye adi sɛ mene no.+ 20 Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a ogye nea mesoma no no, ogye me nso.+ Na obiara a ogye me no gye Nea ɔsomaa me no nso.”+ 21 Bere a Yesu kaa eyi wiei no, ne ho yeraw no, na ɔkae sɛ: “Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, mo mu baako beyi me ama.”+ 22 Asuafo no mu biara fii ase hwɛɛ ne yɔnko anim, na na wonhu onipa a ɔreka ne ho asɛm.+ 23 Ná asuafo no baako, nea na Yesu dɔ no no,+ te Yesu nkyɛn pɛɛ.* 24 Enti Simon Petro buu n’ani kyerɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kyerɛ yɛn nea ɔreka ne ho asɛm no.” 25 Ɛnna osuani a Yesu dɔ no no pa twerii Yesu kokom, na obisaa no sɛ: “Awurade, ɛyɛ hena?”+ 26 Ɛnna Yesu buae sɛ: “Ɔno na mede paanoo sin bɛbɔ ayowa mu ama no no.”+ Afei ɔde paanoo sin no bɔɔ mu, na ɔde maa Yuda, Simon Iskariot ba no. 27 Bere a Yuda gyee paanoo sin no, Satan bɛhyɛɛ ne mu.+ Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea woreyɛ no, yɛ no ntɛm.” 28 Wɔn a wɔtete ɔpon no ho de, na obiara nnim nea enti a ɔkaa saa kyerɛɛ no. 29 Yuda na na okura sika adaka no,+ enti ebinom adwene yɛɛ wɔn sɛ Yesu reka akyerɛ no sɛ, “Kɔtotɔ nneɛma a yɛde bedi afahyɛ no,” anaasɛ ɔmfa biribi mma ahiafo. 30 Bere a ogyee paanoo sin no, ntɛm ara na ofii hɔ. Ná ɛyɛ anadwo.+ 31 Bere a opuei no, Yesu kae sɛ: “Afei wɔahyɛ onipa Ba no anuonyam,+ na ne nti, wɔahyɛ Onyankopɔn anuonyam. 32 Na Onyankopɔn ankasa bɛhyɛ no anuonyam,+ na ɔbɛhyɛ no anuonyam ntɛm. 33 Mma nkumaa, me ne mo bɛtena kakra. Mobɛhwehwɛ me; na sɛnea meka kyerɛɛ Yudafo no sɛ, ‘Baabi a merekɔ no morentumi mma hɔ’+ no, saa ara na seesei mereka akyerɛ mo nso. 34 Mede ahyɛde foforo rema mo, sɛ monnodɔ mo ho; sɛnea medɔ mo no,+ mo nso monnodɔ mo ho saa ara.+ 35 Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahu sɛ moyɛ m’asuafo.”+ 36 Simon Petro bisaa no sɛ: “Awurade, ɛhe na worekɔ?” Ɛnna Yesu buae sɛ: “Baabi a merekɔ no, worentumi nni m’akyi seesei, nanso akyiri yi, wubedi akyi aba.”+ 37 Petro bisaa no sɛ: “Awurade, adɛn nti na merentumi nni w’akyi seesei? Mede me nkwa* bɛto hɔ ama wo.”+ 38 Yesu buae sɛ: “Wode wo nkwa* bɛto hɔ ama me? Nokwarem mereka akyerɛ wo sɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+
^ Anaa “ɛyɛ mo asɛde sɛ.”
^ Nt., “magyaw mo nhwɛsode; matwa sa ama mo.”
^ Anaa “wama ne nantin so atia me.”
^ Nt., “tweri Yesu kokom.”